[Video] Ada Bunyi Aneh Di Langit Kota Samarahan
Wikileaks revealed the Anti-Muslim activities of previous Military authorities
Hot, Down And Out
One to Move Your Heart
BN guna cash beli undi - Abdul Kadir Sheikh Fadzir
Posted: 17 Jan 2012 08:48 AM PST
Dawn Sky In Penang – Dawn is the time somewhere about Sunrise where night and day meet at the horizon. I was driving early from Penang Island to Seberang Perai yesterday's morning at about 7am. The sky was so blue and the dawn sky was so pretty. I quickly took out my camera – Panasonic Lumix LX5, slowed down my vehicle on the road and start snapping away. I know it's not right to do so but I just couldn't help myself capturing the beauty of dawn in Penang.
Penang is beautiful, isn't she?
Posted: 17 Jan 2012 08:38 AM PST
I have been following this 'corporate' blog overayear now. Its interesting in the sense that it carries allegations that nobody - including the Securities Commission boss Zarinah Anwar - had made no attempt to deny it.
Its attacks on auditing firm PriceWaterhouseCoopers (PwC) also contain proofs and strong arguments.
In its latest series of 'corporate allegations', Zarinahtakesapaycut claims that the listing of Felda Global Ventures Holding is being manipulated by PwC boss Johan Raslan & Gang.
The listing, it says should rightfully be an event that will bring great joy to the Felda settlers "but could there beafly in the ointment that we are missing, that can turn what should be tears of joy into genuine tears of sorrow and grief....?
"The numbers are now being crunched by PwC Malaysia, in preparation for the listing of FGVH, and therein lies the problem.
"Will institutional investors trust an audit done by PwC Malaysia? Will any investor worth his salt trust an audit done by an audit firm like PwC Malaysia that fabricates documents and submits them inabundle toaCourt of Law?
"Is it worth risking the future of thousands of settlers and their families, when the proof of fabrication comes out in open court, and the forgers are found to be the very same chaps running the audit firm behind the Felda listing?"
According to the blogger,aPwC insider told them there was evident of fabrication of documents by the auditing firm for the listing, and that evidence is going to come out in open court in February.
To add insult to injury, 'a little bird says that Chin Kwai Fatt (Johan's partner in PwC) himself will be shown as having fabricated one of the documents during the trial...'
"PM Najib, we, the group of six behind this blog, are fully behind you, but we must ask you this painful question. Can you risk having the misdeeds of PwC Malaysia and Johan Raslan costing you crucial votes in GE 13?
"Can we risk having the Felda settlers angry with the outcome of the listing simply because investors everywhere start hearing caveat emptor whenever someone whispers PwC Malaysia into their ears?"
Posted: 17 Jan 2012 09:58 AM PST
Insiden 'bunyi aneh dan menakutkan' dari langit yang kedengaran di Kota Samarahan, Sarawak pada 11 dan 12 Januari lalu kini mendapat perhatian antarabangsa apabila artikel mengenainya yang disiarkan di The Borneo Post mula dibincangkan secara hangat di internet di seluruh dunia.
Bagaimanapun masih tidak dapat dipastikan sejauh mana kaitannya antara bunyi aneh itu dan kejadian gempa bumi tersebut. -wowberita
"It was around2am when I was awoken byastrange sound. It wasaloud hushing sound, and quite similar to someone snoring.
"I immediately got out of bed and went outside of my house to see what was happening. The feeling wasachilling one. I could not establish where the sound was coming from … it was as if something coming from the sky.
"Frightened, I quickly dashed inside, but stayed awake till daylight as I would not sleep any longer. If I am not mistaken, the sound persisted until about 5am."
"Villagers in Meranek, Pinang, Sindang, Tambirat and even those living at Desa Ilmu housing estate have also heard those eerie sounds."
"The factory has been there for the last eight years, and I am sure it was not sounds produced by the machines there. In addition to that, no oil palm processing machines could produce sounds which could be heard 8km away," said Harith, who also madearecording of what he had witnessed. To verify Harith's theory, Ferdauz decided that should the phenomenon occur again the next day, he would makeadash for the factory.
Ferdauz: "I worked ataschool in Sebuyau, so I wake up very early to go to school. True enough, the strange sounds happened the next day, and I quickly madeastop in front of the factory. No sounds came out from there (factory)."
"The clouds appeared to be in straight lines, and well formed. I have never seen anything like it, but whatever it is, I am sure there must beascientific explanation for it.
"But later that day, an earthquake hit Sumatera in neighbouring Indonesia withamagnitude of 7.3 on the Richter scale. I am not sure whether both incidents are related in some ways."
Meanwhile, Kampung Meranek's JKKK chairperson Mahmud Pawi, who claimed that he also heard the sounds together with his family, said hoped that the authorities concerned could shed light on the matter.
"When I woke up that morning (Jan 11), I had goose bumps just listening to the sounds. I quickly woke up my entire family and we sat at the veranda trying to figure out what it was and where it was coming from.
"We hope that someone can step forward and enlighten us with an explanation." -borneopost
Posted: 17 Jan 2012 07:47 AM PST
This evening, Angela sent me an article by Ken Murray, Clinical Assistant Professor of Family Medicine at USC, on How Doctors Die -It's Not Like the Rest of Us, But It Should Be. I googled for the original site and managed to find it at Zocalo Public Square. Believe me - this is one article that everyone should read!! Thanks to Angela who shared this with me. Do leaveacomment to share your thoughts/responses. Take care and havearestful evening.
How Doctors Die - It's Not Like the Rest of Us, But It Should Be
Posted: 17 Jan 2012 06:19 AM PST
http://platform.twitter.com/widgets/hub.1326407570.html Cable reference id: #05RANGOON1186
Win Mya Mya said that the government also attempted to instigatearift between Buddhist and Muslim NLD members. Leaflets, supposedly written by the Monks Association, were distributed on the streets of Mandalay stating that the monks should unite to root out Muslim influence in the party. In addition, the notice made derogatory references to Mya Mya Win, who is Muslim, stating "What is the NLD in Mandalay doing today… following Daw Suu Kyi's path or Kalama (derogatory word for Indian) Win Mya Mya's?"
An accompanying notice, with no signature, criticizes Win Mya Mya's pride and attitude, stating, "Do not beacopycat to the daughter ofaNational leader, you cannot compare." (The full translated texts of both documents have been emailed to EAP/MLS desk officer Alex Barrasso.) Win Mya Mya professed to be untroubled by the propaganda, and suggested the general public understands that it isaruse on the part of the regime. In addition, she has spoken to the Monks Association, which disavowed the leaflets. Win Mya Mya added that she hasavery strong, positive relationship with the Monks Association because her family regularly sends food and other goods to imprisoned monks. ¶6. (C) Win Mya Mya told the Charge that the NLD appreciates and supports the recent Tutu-Havel report, especially its nonviolent approach, and welcomes the UN Security Council's taking up the issue of Burma. The Charge said that the U.S. actively supports the initiative to have the UNSC discuss Burma. Win Mya Mya said that the NLD has sacrificed much and she requested the U.S. provide support to pro-democracy activists. The Charge responded that one of our highest priorities is to provide moral support to pro-democracy activists. She said that many in the Embassy were frustrated with the present situation and wanted to do more, so if the Win Mya Mya had any specific requests the Embassy would be pleased to consider them. Win Mya Mya replied that she was proud to hear this. Local NGOs Find Ways Around the Authorities.
C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 02 RANGOON 001186 SIPDIS STATE FOR EAP/MLS E.O. 12958: DECL: 10/19/2015 TAGS: PGOV [Internal Governmental Affairs], PHUM [Human Rights], PREL [External Political Relations], BM [Burma], Mandalay, NLD [National League for Democracy] SUBJECT: MANDALAY ACTIVISTS MANAGE TO PERSEVERE Classified By: APAO Kim Penland for Reasons 1.4 (b,d)
¶1. (C) SUMMARY: The Charge met in Mandalay on October7with NLD senior organizer Win Mya Mya, the leadership of YMCA, and toured the Phaung Daw Oo Monastery high school. These activists report that the government has made it increasingly difficult to operate within Mandalay and the surrounding villages. The government has also restricted NLD meetings, begunacovert campaign to pit Muslims against Buddhists within the party, and boarded up NLD signboards notifying the public of the location of three different offices. END SUMMARY. Win Mya Mya Continues to Stand Up to Government ——————————————— — ¶2. (C) Win Mya Mya is the spokesperson for the NLD in Mandalay and comes fromastaunch family of NLD supporters. In the May 30, 2003 Depayin attack, when she was 55-years-old, government thugs broke both her arms. She still bearsasix inch scar on her left arm, and she no longer has full use of her right hand. Although she has been arrested and re-imprisoned almost every year since 2001, she continues to be an outspoken dissident who often defies the regime outright. Her family ownsanumber of tailor shops which have become informal gathering points for citizens who wish to see or communicate with her. The government regularly visits these shops to tell her employees and customers not to gather. These warnings have increased in frequency so that people have begun to exercise more caution, but according to Win Mya Mya, they still find ways to quietly inform her about the activities of various groups. ¶3. (C) Win Mya Mya told the Charge that government pressure has increased in the past few months. She said since 1996 the government has wagedacampaign of elimination against NLD members, which includes both imprisonment and offering NLD members financial enticements to leave the party. Many NLD members have been forced by their political activism to sacrifice economic gains to the point where they have been forced to sell their cars and homes, so these enticements have some appeal. ¶4. (C) Win Mya Mya said that in recent months Mandalay authorities have been actively trying to squash NLD operations by boarding up NLD signboards at three separate locations and homes and refusing to grant permission for large gatherings. The NLD has worked around this by using its members' homes. She said authorities tried to restrict attendance at recent NLD meetings to 50. She refused, but promised NLD would take care of security and would not make inflammatory speeches. Five hundred NLD supporters subsequently gathered peacefully with no interference. Meanwhile, inanearby township, government authorities have attempted to befriend NLD members in an attempt to infiltrate and neutralize the party, said Win Mya Mya. Pitting Muslims Against Buddhists
——————————————- ¶7. (C) Mandalay YMCA and World Vision activists told the Charge that government officials recently began restricting NGOs from direct community involvement. Pending projects range from the establishment ofaprimary school to introducingaprogram on personal hygiene to children in local communities. Many Township Coordinators, who approved projects in the past, can no longer do so because their superiors have made it clear that final approval will no longer be forthcoming for any project. The climate is such that Township Coordinators are scared to approach even those authorities who might accept and approve project proposals. Even though World Vision has an MOU with the Ministry of Heath to provide better health care to Burmese citizens, every new project now must receive permission to take place. If the project does not strictly adhere to the MOU, the government refuses permission. In addition, the government has made it harder to get visa extensions for foreigners working with YMCA and World Vision. ¶8. (C) However, the YMCA can still organize and hold various classes and workshops at their Mandalay headquarters and at its branches around Mandalay, including on topics such as grassroots organizing and leadership. The activists agreed that despite the added pressures, they would continue to make end-runs around the regime. One of the participants, who has his own travel business, said that the government recently began refusing to allow international tourists to donate school supplies directly to poor schools north of Mandalay. He therefore put in requests for supplies from the schools that happened to match the donations received, and then told the government thatalocal person would fill the schools' request. Monastery Runs the Only Quasi-Private School in Burma ——————————————— ——– ¶9. (C) The Charge toured the Phaung Daw Oo Monastery High School — one of the few schools that provide an education and curriculum not entirely dictated by the government. The Monastery hasatotal of 5,885 students, most of whom are poor. They come from throughout Burma, including minority areas. All of the students benefit from the higher standard of training the teachers have received, and 227 of the brightest students, regardless of ethnicity or sex, are taught classes in both Burmese and English with the English courses using imported textbooks and supplementing the curriculum. U Nayaka, the abbot, said that they were given the freedom to offer extra curricula and better teaching methodologies because they fall under the jurisdiction of the Ministry of Religious Affairs, rather than the Ministry of Education like all other schools. However, there are only two high schools like this in the entire country and the other only uses the Burmese curriculum. ¶10. (C) Comment: Mandalay is the second largest city and is the cultural heart of Burma. We spoke toavariety of people willing to stick their necks out to makeapositive difference in their country. They haveasense of how hard and where they can push to do more for the disadvantaged. These particular individuals are not unique. Many people throughout the country quietly strive for ways to bring change to Burma. The cumulative impact of these individual efforts can be powerful, but it may take time. End Comment. Villarosa
Posted: 17 Jan 2012 07:05 AM PST
Bekas menteri itu yang masih lagi seorang anggota parlimen dikatakan menerima 'sumbangan' berkenaan daripada sebuah syarikat tahun lalu.
Now get down to business. Let's divert the attention to another member of parliament. This member of parliament also received monies from Dato' Yahya Abd Jalil companies (AMPMSB).
The Member of Parliament meant here was the former Minister of Youth and Sports Malaysia from March 2004 until March 2008 and also the former Minister of Tourism Malaysia from March 2008 until April 2009. The Member of Parliament is none other than YB Dato' Sri Azalina Othman Said, Member Of Parliament Pengerang, Johor.
She has received "contributions" of RM 300,000.00 on 07/04/2011 thruacheque number 872045 (here) belonging to AMPMSB. As I said, the true nature of the "contribution" is only known to the giver and the receiver. Perhaps it is best to let Dato' Sri Azalina Othman makeastatement just like her counterpart has. Perhaps SPRM also can haveacloser look at this. -thewistleblower
I've been out of the blogging loop for quiteawhile these days. The only times I actually post something are just afterarace I've gone to and you're all probably bored to death about reading my running exploits already. I know I would be if I were in your shoes. Come on, you can be honest with me ... LOL!
Nothing much has been happening since the new year. The only thing of note is the fact that I'm swamped with work which is really surprising actually since every year before the Chinese New Year holidays we're practically sitting in the office all day and staring at the four walls. This year somehow it's been pretty different. I don't have time to even sit at my desk, let alone stare at the wall.
Too many rush jobs that need to be settled such as this Alpinestars Ridge Boots flyer, before the holidays start next week and with the current heat wave and my flu spell that I'm going through right now is just making things all the more difficult to cope hence the lack of time to blog.
I needanice long break to just get away from all these stress forabit. I would go out and run to try and clear the stress but I'm still suffering fromabout of the flu and the weather is just too crazily hot to run. Maybe when I recover that might be an option but not just yet. The heat is really excruciatingly hot the past week or two, 7.30pm in the evening looks like it's still 4.30pm with the blistering sun!
Now if you'll excuse me, I need to go find some tissues and clear this blocked nose.
Posted: 17 Jan 2012 08:03 AM PST
"(Justeru), serahkan kepada Suruhanjaya Diraja untuk menjawab soalan: Siapa selain Muhyiddin yang harus bertanggungjawab dalam "kemelut" NFC di mana objektif projek penternakan lembu tersebut adalah untuk meningkatkan keluaran bekalan daging negara," kata beliau.
Ketua Pembangkang DAP Lim Kit Siang berkata, selain "kisah-kisah seram" mengenai skandal "kondo lembu" RM300 juta, ia juga patut difokuskan kepada peranan dan tanggungjawab Muhyiddin yang mungkin terlibat secara langsung dalam skandal itu.
"Biarkan RCI yang menjawab: Siapa lagi selain Muhyiddin yang patut menanggung semua tanggungjawab berhubung 'kacau bilau' NFC di mana objektif projek untuk meninggkatkan peningkatan daging lembu menyimpang dan tidak sampai matlamatnya," katanya dalam satu kenyataan hari ini.
Justeru Kit Siang menjelaskan bahawa kenyataan tersebut mengingatkan rakyat Malaysia bahawa PAC juga bertindak dengan cara yang pelik dalam siasatan skandal "kondo lembu" NFC itu.
"…(PAC) gagal untuk menjalankan siasatan penuh skandal itu untuk dibentangkan laporannya kepada Parlimen pada 12 Mac depan, walau pun skandal itu adalah skandal besar dan utama!" katanya.
Posted: 17 Jan 2012 03:49 AM PST
He met her ataparty. She was such an outstanding beauty that many guys chased her.
He was so normal that nobody paid attention to him.
At the end of the party, he invited her to have coffee with him and she was surprised but being polite, she agreed.
As they sat inanice coffee shop, he was too nervous to say anything. She felt so uncomfortable that she wanted to go home.
Suddenly, he asked the waiter, "Can you please give me some salt? I'd like to put it in my coffee."
She asked him curiously, "Why do you have this fetish?"
He replied, "When I wasalittle boy, I lived near the sea, I liked playing in the sea, I could feel the taste of the sea ,just like the taste of the salty coffee. Now every time I have the salty coffee, I always think of my childhood, think of my hometown, I miss my hometown so much, I miss my parents who still live there."
While saying that tears filled his eyes. She was deeply touched. That's his true feeling, from the bottom of his heart.
Then she also started to speak, spoke about her faraway hometown, her childhood, her family. That wasareally nice outing and alsoabeautiful beginning of their story.
They continued to date. She found that actually he wasaman who met all her demands: he had tolerance, was kind hearted, warm, careful. He was suchagood person but she almost missed him!
Thanks to his salty coffee! Then the story was just like every beautiful love story...
The princess married the prince, then they were living the happy life...
Please forgive me. Forgive my lifelong lie. The only lie I ever told you was the salty coffee.
Remember the first time we dated? I was so nervous at that time. Actually I wanted some sugar, but I said salt It was hard for me to change so I just went ahead. I never thought that could be the start of our communication!
I tried to tell you the truth many times in my life, but I was too afraid to do that, as I had promised not to lie to you for anything...
Now I'm dying, I'm afraid of nothing so I tell you the truth: I don't like the salty coffee, whatastrange bad taste.. But I have had the salty coffee for my whole life.
If I can live for the second time, I would still want to know you and have you for my whole life, even though I have to drink the salty coffee again."
Love is not to forget but to forgive, not to see but understand, not to hear but to listen, not to let go but HOLD ON !!!!
What makesaperson so rich? Some say money and some say health, but for me it is friendship, that carries insurmountable wealth.
Do leaveacomment to share your thoughts! I would love to hear your views/experiences.
If you havealove story to share, do send it to mwsmithunplugged@gmail.com
Thanks! Havealovely evening!
Posted: 17 Jan 2012 03:06 AM PST
I have one friend who hails from Labuan who once told me that he received cash handout each time there wasageneral election. So, this claim made by this ex-minister is nothing new.
Hopefully, in the next general election, the rakyat especially the Sarawakians and Sabahans, will take the money from BN but give the votes to non-BN!
Katanya, walaupun penggunaan dakwat kekal yang dikemukakan oleh PSC adalah hanya "satu daripada lapan tuntutan (BERSIH), namun ia permulaan baik.
"Saya menantikan lebih banyak syor dan cadangan dalam laporan kedua PSC," katanya.
Posted: 17 Jan 2012 02:03 AM PST
"Kalau betul mahu pertahankan Islam, patutnya sokong permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu kes dipindahkan dari mahkamah sivil ke mahkamah syariah.
"Maka dengan ini kami desak polis menyiasat dan mengambil tindakan undnag-undang terhadap dua individu ini bersama MAIWP dengan segera," katanya.
Posted: 17 Jan 2012 12:15 AM PST
Menjelang majlis angkat sumpah ahli exco kerajaan negeri baru esok, spekulasi bertiup kencang apabila tiga nama disebut calon 'utama' menggantikan Datuk Dr Hasan Ali yang digugur setelah dipecat dari PAS.
"Saya masih baru dan mahu fokus kerja sebagai Pesuruhjaya PAS. Dr Shafie beliau adalah calon tepat untuk mengisi kekosongan jawatan exco itu. Namun andai saya dipilih…saya terima dengan hati yang terbuka," katanya.
Menurut satu sumber kriteria sebagai 'orang yang lebih berpengalaman' meletakkan Dr Shafie sebagai calon 'utama' menggantikan Dr Hasan.
"Kita lihat portfolio beliau (Dr Shafie) sebagai pembantu Dr Hasan sebelum ini malah beliau juga merupakan bekas pensyarah. Beliau sudah mempunyai pengalaman untuk menggalas jawatan exco," kata sumber terbabit.
"Perubahan portfolio akan diberitahu jika perlu," katanya pada sidang akhbar selepas menghadiri perhimpunan bulanan kerajaan negeri di Shah Alam itu semalam. -FMT
Posted: 16 Jan 2012 10:46 PM PST
Posted: 16 Jan 2012 10:40 PM PST
I don't know why but some people just annoy the crap outta you and you simply hate everything about them. You hate it when they talk. You hate it when they walk. You hate it when they laugh. You hate it when they listen to your conversations. You hate it when they do just about anything. Heck, you even hate it when they're in the same room sitting quietly inacorner like the dumbo that they are, looking lost but do not quite know how to be un-lost. They bother you even when they are not actualy bothering you. It's like the world would beabetter place without them. In fact, I KNOW the world would beabetter place without them.
Why do I feel this way? I have no idea.
But I do know that if I never have to see her again I would beamuch happier person.
And that my friends, is not suchabad thing
Posted: 16 Jan 2012 10:09 PM PST
က) တံတားအောက်၌မြစ်ရေတို့စီးဆင်းနေဆဲ … အနှ စ်နှ စ်ဆ ယ်ကျော် အချိ န်ကာလတို့ သည် အာရုံအ မြင် တို့  ကိုဝေး၀ါးစေခဲ့သ ည် ။ တချို့တပိုင်းတစ … တချို့ဝိုးတ၀ါး … မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တခါကပုံရိပ်တို့ကို ကျနော့်နှလုံးသားဖြင့် လိုက်လံဖ မ်းဆုပ်စုစ ည်းကြည့်မိသ ည် ။ မိ မိရင် ခုန်သံကို မိ မြိ ပန် လ ည် ခံစားလာရသည် ။ ဆရာတာရာကတော့ သူ ၏ ဒို့ ခေတ် ကိုရောက် ရ မည် မ လွဲပါစာအုပ်အမှာ၌ ကျနော် ရင်ခု န်သံကို ယုံ ကြည်သည်၊ ရင်ခု န်သံသည် ခံစားမှုအစစ်အမှန်ဖြစ်သည် ဟုရေးသားခဲ့ဖူးသည်။ ကျနော်သည်လည်းဤစာစုကို …
(ခ) တလောက အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ သူ့ဓါတ်ပုံကို ပြန်တွေ့လိုက်ရသည်။ ပုံထဲတွင် သူက ဖီးလ် ဂျက် က က်နှ င့် အောက် ခံေ ပြာက် ကျားအင်္ကျီြ ဖင့်၊ တောထဲ တွင်ရို က်ထားသည့်ပုံ ထ င် သ ည် ၊ သူကျောင်းသားတပ်မတော်မြောက်ပို င်း ဥက္ကဋ္ဌဘ၀နှင့် ရို က်ထားပုံ ဖြစ်မည်။ သို့ သော် ပုံ ထဲ၌ သူ့  အပြုံးက တောက် ပ ၀င်းပြက် ဆဲ… သူ့  ကိုကျနော် စ တွေ့  တုန်း က ဤပုံမျိုးမဟုတ်လည် ကတုံး အင်္ကျီ အ ဖြူ ကချင် ပုဆိုးကွက် စိပ်နှင့် ၊ အပြုံးကတော့ အခုဓါတ် ပုံ ထဲက လို ပ င်ေ တာက်ပ ၀င်း ပြက်လျှ က်… နေရာကရန်ကုန်လ မ်း မတော်ေ ဆးတက္ကသို လ်(၁) စာသင်ခန်းမတခုထဲမှာ၊ ကျနော်တို့ ရှေ့တည့်တည့်ရှိ ဘလက်ဘုတ်ပေါ်၌ မြေဖြူဖြင့် ကြားဖြတ်အစိုးရ
ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ၊ မြန်မာနို င်ငံလုံးဆို င်ရာကျောင်း သားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်ဟုေ ရးထားပြီး အောက် က ရက် စွဲ မှာ (၁၃.၉.၈၈)၊ ဘလက် ဘုတ်ေ ရှ့  ဆရာစင်ြ မင့်ေ ပ်ါမှာစီ ချထားသော ကုလားထိုင်ခုံများပေါ်၌ ဗိုလ်ရန်နိုင်၊ ဗိုလ်အောင်ကြီး၊ ဦးနု၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝမ်ကိုဟော(ချင်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင်) တို့ထိုင်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကျောင်းသားတွေက ၎င်းတို့ရှေ့ရှိစာသင်ခုံတွေမှာ အစီအရီ ထိုင်နေကြသည်။ ဦးစွာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ တယောက်တလှည့်ဆွေးနွေးကြသည်။(ဆွေးနွေးသည်ဆိုခြင်းထက် တင်ပြတိုက်တွန်းတောင်းဆိုသည် ဆိုက ပိုမှန်မည်ထင်သည်။) ကျောင်းသားများဘက်မှ ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရန် တင်ပြခဲ့ပြီးနောက် လူထုခေါင်းဆောင်များဘက်မှ ပြန်ပြောကြပါသည်။ ပထမဆုံး ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းသခင်နု ပြောသည်။ သူကစက်တင်ဘာလ (၉ )ရက်နေ့က သူဖွဲ့စည်းခဲ့သော စင်ပြိုင်အစိုးရထဲတွင် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရန်ပြောသည်။ ထို့ နောက် ဗို လ်အောင်ကြီးက အားလုံး မပါဝင် မတိုင်ပင်ဘဲလုပ်လျှင် သူပါဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ခပ်တိုတိုပဲ ပြောသည်။ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆ န်း စြု ကည်ပြောသည်။ ဒေါ်စုက ကျောင်း သားမျာအစည်း အဝေး ဆို ၍ သူလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဘာအစည်းအဝေး ဟုကြိုပြောမထားကြောင်း၊ ဒီရောက်မှ ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရန်ဖြစ်နေကြောင်း ဒီကိစ္စ၌ သူပါဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောသွားခဲ့သည်။ ဦးတင်ဦးကတော့ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ လိုရာပန်းတိုင်ကို ရနိုင်မည်ဟု ထင်ကြောင်းပြောသည်။ ဦးဝမ်ကိုဟောကတော့ ဦးနုနှင့် တသဘောထဲ ပြောသည်။ နောက်ဆုံး၌ ဗိုလ်ရ န်နိုင်ပြောပါသည် ။ ၎င်းတို့ အားလုံး တွ င်ကျောင်းသားထုဆ န္ဒ (အမှ န်ေ တာ့ ကျောင်းထုဆန္ဒသက်သက်မဟုတ်ပါ တတိုင်းပြည်လုံး လှည်းနေ လှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် အထွေထွေ သ ပိ တ်ြ ကီးနှ င့် လူ ထုတ ရပ် လုံးက တညီ တ ညွ တ်တ ည်းကြားဖြတ် အ စိုး ရကိုတောင်းဆိုနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။) နှင့် အကိုက်ညီဆုံး အရိုးသားဆုံး ပြောသွားသူမှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် နှ င့် န ယ် ချဲ့  ဆန့်  ကျင်ရေးခေတ် တကသ၊ ဗကသခေါင်းဆောင်ဟောင်းကိုထွန်း ရှိန်(ခေါ်) ဗို လ်ရန်နို င်ဖြစ်ပါသည်။ ဗို လ်ရန်နို င်က ကျောင်းသားများတင်ပြတောင်းဆို သောကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းရေးကို သူ့အနေဖြင့် အကြွင်းမဲ့ ထောက်ခံသဘောတူကြောင်း ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ခဲ့လျှင် သူ့ကိုမည်သည့်တာဝန်ပေးပေး ထမ်းဆောင်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ဒီနေ့ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့ပြီးလျှင် နောက်တ နေ့တွ င်ဂျပန်နို င်ငံမှဒေါ်လာသန်း (၂၄၀) ကျော်အကူအ ညီရ စေရမည်ဟုသူအာမခံေ ကြာင်း ပြောသွားပါသည်။ ထို သို့  လူထုေ ခါင်း ဆောင်များပြောပြီး နောက်ကျောင်း သားများဘက်မှတဖန်ြ ပန်လ ည်ေ ဆွးနွေးကြပါသည်။ ခန်း မ၏ ညာဘက်ြ ခမ်း အလယ်ခုံလောက်မှ အရပ်မနိမ့်မမြင့် အသားဖြူဖြူပိန်ပိန်ပါးပါး လည်ကတုံးအင်္ကျီဖြူ ကချင်ပုဆိုးနှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ထိုင်ခုံမှထ၍ ဆွေးနွေးပါသည်။ ပထမ၌ သူ့အသံကို မကြားတချက် ကြားတချက် ၊ နဲ နဲအ ရှိန်ရ လာတော့ သူ့  အသံ က ကြည် လ င်ြ ပတ် သားလာပြီးအထစ် အ ငေါ့ မ ရှိကြားဖြတ် အ စိုး ရဖွဲ့ စည်းရန် အမြန် ဆုံးလိုအ ပ်နေပုံ၊ အချိ န်သိပ်မ ရှိေ တာ့ ၍ လူ ထုဘ က် မှလက်ဦးမှုယူပြီးဖွဲ့စည်းနိုင်မှဖြစ်မည်ဟု ပြောသွားပါသည်။ သူပြောပုံက ထိုအချိန်က ပကတိ အခြေအ နေ အချက်အ လက်များနှင့် အကို က်ညီဆုံးစကားလုံးများ ဖြစ်ေ နသည်။ သူက ပြောနေရင်း ရှေ့  စားပွဲခုံပေါ်၌ချထားသော သူ့  မှ တ်စုစာအုပ်က လေးကိုလ ည်းလက်ြ ဖင့်ေ ထာက် ကာကြည့်ရ င်းပြောသွားပါသည် ။ သူပြောပုံက အခြားကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေပြောပုံနှင့် နဲနဲကွာခြားနေသည်ဟု ကျနော်ခံစားမိသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု (Emotion) ဖြင့်ပြောခြင်းမျိုးမဟုတ်၊
သေသေချာချာနေ့  စွဲ အဖြစ်အ ပျက်များကို ရေးမှတ်ထားပြီး အချက်အ လက်နှင့် ကိုးကား ပြောသွားသည်။ ထိုစဉ်ကသူသည် မန္တလေး ဂျီတီအိုင်ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် မန္တလေး ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌ အနေဖြင့် ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ အထက်ဗမာပြည်မှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် များအဖြစ် ကိုသ န့်  စင် နှ င့် ကိုထွန်း အောင်ကျော် တို့ နှ စ်ေ ယာက် ထို အစည်းအဝေးသို့  တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဤကားသူနှင့် ပထမဆုံးတွေ့ဆုံ ခြင်းဖြစ်သလို သူ့ကိုပထမဆုံး သတိပြုမိခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) စစ် တ ပ် မှအာဏာသိ မ်း ခံ ခဲ့ ရ ပြီးနောက် ၁၉၈၈ နှ စ်ကုန်ပို င်း ခန့်  တွင်ဗဟန်းအုတ်လ မ်းရှိပြည် ထဲေ ရးဝန်ြ ကီးဟောင်းဦးကျော်ြ ငိ မ်း အိ မ်ကားဂိုေ ဒါင် ထဲမှအစည်းအဝေးများတွ င်သူ့ကို ပြန်တွေ့ရသည်။ ကျနော်တို့ သည် တချိန်က နာမည်ကျော်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဟောင်း၏ ကားဂို ဒေါင်မျက်နှာကျက် ထု တ်တန်းသစ်သားတန်းများပေါ်ရှိ ၀ါကြန့်ကြန့် သတင်းစာဖို င်တွဲများ မှတ်တ မ်း မှတ်စုများကို မျက်နှာ ကျက်မိုးသဖွ ယ်ြ ပုလုပ်ထားသောအောက်ရှိ ကြမ်း ခင်း ပေါ်၌ ၀ိုင်း ဖွဲ့ စုထို င်ြ ပီးကျောင်းသားသမဂ္ဂ လှုပ်ရှားမှု များကိုအရှိန်အ ဟုန်မ ပျက် ဆက် လ က် ဆောင် ရွက်နို င်ေ ရး၊ ဗကသနှ င့် မကသ ပေါင်းစည်းရေး၊ ကျောင်းသားညီ ညွတ်ေ ရး နှ င့် အထက်ဗမာပြည် အောက်ဗမာပြည် ကျောင်းသာလှုပ်ရှားမှုများ ဟန်ချက်ညီညီ လှုပ်ရှားနို င်ရေး စသည့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှုကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ တနေ့ အ စည်းအဝေးတွ င်သူ အ တန် င ယ်နောက် ကျမှ ရောက် လာပြီးကျနော့်နံေ ဘးတွ င်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ကျနော့်ကိုသူ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရင်း ကျနော့်ရှေ့ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ချထားသော သခင်ဗဟိန်း၏ " ဓနရှင်လောက" ဆို သော စာအု ပ်ကို ဖျက်ကနဲကောက်ယူပြီး ချက်ချင်းပင် မှောက်လျှက်အနေထေား ပြန်ချထားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဘာမှမဖြစ်သလို လက်ကိုမေးစေ့ထောက်ကာ ဆွေးနွေးပွဲကို အရှိန်မပျက် ဆက်နားထောင်နေသည်။ တချက်တချက် သူလည်းဝင်ဆွေးနွေးသည်။ အစည်းအဝေးပြီးတော့ ကျနော့်နောက်မှ သူလို က်လာပြီး ပခုံးကို လက်ဖြင့်ပု တ်ကာ " ဒီလို အစည်းအေဝေးမျိုးတွေကို အဲဒီလို စာအု ပ်မျိုးတွေယူမလာစေချင်ဘူး ရဲဘော်ရာ" ဟု ကျနော့်အတွက် စိုးရိမ်သောလေသံဖြင့် သတိပေးလိုက်သည်။ ကျနော်ကလည်း ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါ လက်မှာကိုင်ထားသော သခင်ဗဟိန်း၏ စာအုပ်ထဲတွင် သခင်သန်းထွန်း၏ အင်းမတန် လှပသော အမှာစာပါသည်။ ထိုအမှာရေးဖွဲ့ပုံကို ကျနော်တော်တော်သဘောတွေ့နေမိ၍ ထပ်ကာထက်ကာ ဖတ်မိခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားအကြောင်းမရှိပါ။ သို့သော် ထိုစဉ်က သူစိုးရိမ်သလို ဗကသ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ လှုပ်ရှားမှု ကို ဗကပ ယူ ဂျီ လုပ်င န်းနှ င့် ဆပ် စ ပ် လျက်ြ ဖိုခွ င်း ရန် ကြံစည်နေချိန်၊ သန့်ရှင်းဖြူစင်သော ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို မစင်တပဲသား ခပ်ရန်ကြံစည်နေချိန် မဟုတ်ပါလား။ အတွေးအခေါ်အရ နလပိန်းတုံးများသည် လုပ်ကြံမှုအရာ၌ ပါရဂူမြောက်လှပေသည်။ အဲ ဒီေ နာက် သူနှ င့် ကျနော် ခင် မ င် သွားသည် ။ သူ့  ရုပ်ရ ည် က လူ တ ဖက် သားကိုခင်မ င်နှစ်လို ဖွယ်ေ ကာင်း အောင်စွ မ်း ဆောင်နို င်စွမ်း ရှိ သ ည်ဟုကျနော်ထ င်သ ည်။ တခါတရံလူ့ဘောင်သစ် ၀ါးရုံပင် စခန်းရုံးတွင် လည်းကောင်း တခါတရံ ဦးကျော်ငြိမ်း ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာလည်းကောင်း သူနှင့် ဖြတ်ကနဲဖြတ်ကနဲ ဆုံဖြစ်ခဲ့ ကြပါသည်။ သူ့ ပုံ က ဖြူဖြူသန့် သ န့် ရုပ်ေ ချာချော ကျနော်တို့  ၈၈ မျိုးဆက်ခေတ်ြ ပို င်ကျောင်း သား
ခေါင်းဆောင် များထဲ တွင်သူ့  လိုရုပ်ေ ဖြာင့်ေ ဖြာင့်ေ ကျာင်းသားခေါင်းဆောင် ခပ် ရှားရှား ဟုပြော၍ရမည်လားမသိ။ သူ့ကိုကျနော်တွေ့တိုင်း နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးခေတ်က ကျနော်တို့ ကြည်ညိုလေးစားခဲ့ရသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကို ဗဟိန်းကို ကျနော့်စိတ်ထဲ သွားသွားသတိရနေမိသည်။ သူကလည်းမန္တလေးသားမဟုတ်လား။ ဒီ လို နဲ့ အမျိုးသားအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ြ ကီးဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆ န်းကတော် ဒေါ်ခင်ကြည်ဆုံးတော့ ကျနော်တို့တတွေ အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး လူထုဈာပန ကော်မတီ ဖွဲ့ခဲ့ကြသည်။ ထိုကော်မတီဖွဲ့ရန် အကြံပေးသူကား မှိုင်းရာပြည့်အရေးအခင်းကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြမှိုင်းခေါ် ကြို မ၀င်းဖြစ် သ ည် ။ ၎င်းကော် မ တီ တွင်သူ သ ည် မင်းကိုနို င်၊ ကိုကိုြ ကီး၊ စသူ တို့  နှ င့် အ တူ အထက်ဗမာပြည် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် အဖြစ် ရှေ့တန်းမှာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကတော် ဒေါ်ခင်ြ ကည့်ဈာပန တင်ဆောင် ထားသော ယာဉ် တ န်းရှေ့  တွ င်သူ သ ည် မ င်းကိုနို င်အ ပါအ၀င် အခြားကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် လက်ချင်းတွဲချိတ်ကာ အံကိုကြိတ်လျက် ကမ္ဘာမကြေဘူးသီချင်းကို သံပြိုင် သီဆို ရင်း ဈာပန လို က်ပါပို့ ဆောင်ခဲ့ကြပုံ ကို ခုအချိန်အထိ ကျနော့်မျက်စိထဲကမထွက်။ ထိုစဉ်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင် အားလုံးလိုလို မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျခဲ့ကြရသည်။ ကန်တော်မင် ပန်းခြံသို့ ဈာပနယာဉ်ရောက်သောအခါ စစ်ရုံးချုပ်ဘက်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှ မောင်းပြန်သေနတ်များဖြင့် ချိန်ရွယ်ထားသော စစ်သားများရှေ့တွင် မင်းကိုနိုင်နှင့် မင်းဇေယျာတို့ အပြိုင်တရားဟောလျက် ဒေါ်ခင်ကြည့်ဈာပနကို အောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်ခဲ့ကြသည်။ ဈာပနပြီးနောက်နေ့တွင် ဖြစ်မည်ထင်သည်သူနှင့်ကျနော် ရန်ကင်းစာတိုက်မှတ်တိုင်နားက ဂန္ဓမာလ္ဘက်ရည်ဆို င်လေးမှာ တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ဗကသ ဒုဥကဋ္ဌ ကို ကို ကြီး(ကေကျု့) နှင့် ကိုမြ၀င်းတို့လည်းပါသည်။ ထို့နောက်ကျနော်တို့ကို သူမန္တလေးပြန်တော့မည်ဟုပြောပြီး နှုတ်ဆက်ရင်း လူ စုခွဲြ ကသည် ။ သူ့  ကို ကားမှ တ်တို င်အ ထိ ကျနော် လို က်ပို့  ခဲ့သ ည် ။ ကားလမ်းဖြတ် အ ကူးသူ က ဘေးဘီ ကိုြ ကည့်ကာလေသံြ ဖင့်"ကျနော်တောထဲ ကို သွားတော့ မ ယ် " ဟုပြောခဲ့သ ည် ။ ဘယ်ဘက်လည်းဟုကျနော်မေးတော့ "မြောက်ပိုင်းကချင်ဘက်လေ၊ မန္တလေးက ကျနော်တို့လူတွေ ရောက်နှ င့်နေပြီ " ဟုသူေ ပြာခဲ့သ ည် ။ မကြာခင် ၃၆ ဘတ် စ ကားဆိုက်လာ၍ ကားပေါ်သို့ သူတိုးဝှေ့တက်သွားသည်။ သူလိုက်ပါသွားသော ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန် ဘတ် စ ကားအြို ကီးကိုေ ငးကြည့်ရ င်းကျနော် ကျန် ရ စ် ခဲ့ ပါသည် ။ ဤကား သူနှ င့် နောက် ဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် သူနှင့်မတွေ့ဖြစ်တော့ပါ၊ သူ့အသံဘာမှ မကြားရတော့ …။
(ဃ) ကျနော် အ ဖမ်းမခံ ရ ခင် တလလောက် အ လိုမေလထဲ တွင်ထောက် လှမ်း ရေးဗိုလ်ခ င် ညွန့် ၏ သတင်းစာရှ င်း လင်းပွဲထွက်လာသည် ။ အေဘီမြောက် ပို င်း အချုပ် ခ န်းထဲ မှာ ထွ က်ေ ပြး လွတ်မြောက်လာသော ကျောင်းသားအချို့၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၊ ကျနော် သတင်းစာလည်းဖတ်ဖြစ်သည်၊ တီဗွီဖန်သားပြင်၌လည်း ကြည့်ဖြစ်သည်၊ ထို ကျောင်းသားတွေ မျက်နှာပေါ်တွင် မလွှဲမရှာင်သာ လုပ်ခဲ့ရသောသူများ၏ မျက်နှာအသွင်အပြင်ကို အထင်းသားတွေ့မြင်နေရသည်။ ထိုသူတို့၏ပြောဆိုချက်အရ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို လပေါင်းများစွာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး စစ်အစိုးရ သူလျှိုဟု စွပ်စွဲလျက် ရက်ရက်စက်စက် ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။
ကျနော့်နားနှင့်မျက်စိကိုပင် ကျနော်မယုံနိုင်စရာအဖြစ်၊ ဟုတ်ပါသည် သူသည် သာမန်ညောင်ည ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မ ဟုတ်ပါ။ တခေတ် မှာ တခါ၊ တခါမှာတယောက် ဆို သ လိုကျောင်း သားခေါင်း ဆောင်စစ်စ စ်၊ အင်မ တန်ေ တာ်ေ သာ ထက်ြ မက်ေ သာ ကျောင်း သား ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သူ့ကိုမြင်တွေ့ဖူး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ဖူးသူမှန်သမျှ သူ့မှာရှိသော အရည်အချင်းများကို သိကြရပါသည်။ ဤကဲ့သို့လူမျိုးကိုတောထဲ၌ စစ်ထောက်လှမ်းရေးသူလျှိုဟု စွ ပ်စွဲ သတ်ြ ဖတ်ခံခဲ့ ရ သည်။ လုံးဝမယုံြ ကည်နို င်စ ရာ၊ ကျနော်တို့ ခေတ်ကျောင်း သား လှုပ်ရှားမှုသမိုင်းတွင် လုံးဝလက်မခံနိုင်စရာ အဖြစ်ပျက်ဆိုးကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤအဖြစ်အ ပျက်ဆိုးကြီး ကို ကျနော်တို့  အားလုံးဘယ်လို ဖျောက်ဖျက်ပ စ်နို င်မ ည်န ည်း ၊ ဘယ်လို မေ့ပျောက်ပစ်နို င်မည်နည်း၊ ကျနော့်အတွေးထဲ၌ သူ့ကို သတ်ပစ်တာ ဘယ်သူတွေလဲ၊ အဲ ဒီသူေ တွ နဲ့ တ စ်ဂို ဏ်း တည်း ပူး ပေါင်း ပါဝင်ပ က်သ က်ေ နတာ ဘယ်သူေ တွ လဲဆို တာသမိုင်း သက်သေအဖြစ် သိ ချင် သ ည် ။ သူ သ ည် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် စစ်စစ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ခု ချိန်ထိ သူသာ အသက်ရှင်လျက်ရှိနေဦးမည်ဆို လျှင် သူသည် ကျနော်တို့ ၏ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြသော မင်းကို နို င်၊ ကိုကိုကြီး မင်းဇေယျာ၊ ဋ္ဌေးကြွယ် စသူတို့နှင့်အတူ တတန်းတည်း ရှိနေမည့်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟု ကျနော်ယုံကြည်ပါသည်။ ခုတော့သူမရှိတော့ပြီ … တောထဲ၌ တရားလက်လွတ် ရက်ရက်စက်စက် ညှ ဉ်း ပန်းနှိပ်စ က် အ သတ် ခံခဲ့ ရ သည် ။ သေချာတာတစ် ခုေ တာ့ ရှိ ပါသည် ။ သူ့  ကိုအ ခုလို ရက်ရက်စက်စက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့သူများသည်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် စစ်စစ်တဦးကို ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟု မသိ၍သော်လည်းကောင်း၊ ဂိုဏ်းဂဏစိတ်ထားနှင့် အာဏာလုပွဲကြောင့်ေ သာ် လ ည်းကောင်း၊ မည် သို ပ င်ြ ဖစ်စေ ဤလူ သ တ် သ မားတစုနှင့် အပေါင်းအပါများသည် ကျနော်တို့အားလုံး ဘ၀ပေါင်းများစွာ အထွဋ်အမြတ်ထား စတေးပူဇော်ခဲ့ရသော ရှစ်လေးလုံး (၈၈၈၈) ဒီမို့ရေစီ တော်လှန်ရေး၊ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းနှင့် နဲ နဲမှမ အပ် စ ပ် မပက် သ ပ်သော၊ ဤအရေးတော် ပုံြ ကီး၌ ထဲ ထဲဝ င် ၀ င် မ ပါဝင် ခဲ့ ဘူး သော၊ ဤအရေးတော် ပုံြ ကီးကိုရုပ်ပျက် ဆ င်းပျက် ဖျက် ဆီး လိုေ သာ၊ ရန် သူစ စ် အာဏာရှ င်တို့ နှ င့် အတွေးအခေါ် နှင့်လုပ်ဟန် တထပ်တည်းကျနေသော၊ ဖောက်ပြန်ရေးသမား၊ လူယုတ်မာအချောင်သမား၊ သူလျှို ဒလံ ကြေးစားလူသတ်သမားများသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ (င) ကျနော်သည် စာဖတ်ခန်းထဲမှ စားပွဲပေါ်ရှိ ကွန်ပျူတာ မှန်သားမျက်နှာပြင်ရှေ့ အမှောင်ထဲတွင် တယောက်တည်းထိုင်ရင်း အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှ သူ့ပုံကိုငေးမောကြည့်နေမိသည်။ ဓါတ်ပုံထဲမှ သူ့အပြုံးက တောက်ပ၀င်းပြက်ဆဲ။ လွန်ခဲ့သော အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော်ကလည်း ဒီအပြုံးမျိုးပင်၊ နောက်လဲ ဆက်လက်တောက်ပ ၀င်းပြက်နေဦးမည်ဟု ကျနော်ယုံကြည်သည်။ ကျနော့်မျက်ဝန်းအစုံ တို့ ရီဝေလာသည်။ မျက်တောင်ကို ပုတ်ခတ်၍ ထိန်းလို က် သော်လည်း မရတော့ …။ သူ့ပုံကိုငေးစိုက်ကြည့်နေရင်း တစ်ခါတုန်းက သူနဲ့တွေ့တိုင်း ကျနော့်စိတ်ထဲ၌ ဖြစ်ပေါ်သော အတွေးမျိုးကို ပြန်ခံစားမိသည်။ သူပြောပုံဆိုပုံ ကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့် အပြုံးတို့သည် တခါက ကျနော်တို့  ကြည်ညိုလေးစားခဲ့ရသော လွတ်လပ်းရေးတို က်ပွဲခေတ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်
ကိုဗ ဟိ န်း နှ င့် တော် တာ် တူသ ည် ဟုခံ စားမိ သ ည် ။ ကိုဗ ဟိ န်း ကလည်းမန္တလေးသား၊ သူ က လည်းမန္တလေးသား။ ကိုဗ ဟိ န်း က ထောင့်သုံးရာပြည့်အ ရေးတော် ပုံြ ကီးတွ င်ဗကသ ခေါင်းဆောင် အ နေဖြင့်"မြင်းခွာတချက်ပေါက် လျှ င် မီးဟုန်း ဟုန်း တောက်စေရမည် " ဟုရဲရဲတောက်မိန့်ခွန်းခြွေခဲ့သည် …။ သူကလည်း ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ ကြီးတွင် ဗကသ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တဦး အနေဖြင့် သမိုင်းဝင်ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေး အဆိုကို ရဲရဲရင့်ရင့် တင်ပြခဲ့သည်။ ကိုဗဟိန်းက ဖြူဖြူနုနုကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဘ၀မှ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး၌ ဖြူးချောင်း ဖျား ပဲ ခူး ရိုးမ တောထဲ တွင်ကာဘို င်ေ သနတ်လွယ်လျက်ဖက်ဆ စ်ဂျပန်ကို တော်လှန်ခဲ့သည်။ သူကလည်းဖြူဖြူသန့်သန့်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဘ၀မှ တရုပ်မြန်မာနယ်စပ် ပါချောင်ဒေသ၌ကျောင်းသားတပ် မ တော်မြောက် ပို င်း ၏ ဥက္က ဋ္ဌ အဖြစ် စ စ် အာဏာရှ င်တို့  ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ရန် ကြိုးစားခဲ့သူ..။ ကိုထွန်းအောင်ကျော်က စာပေလေ့လာမှုအခံ အားကောင်းသည်ကိုတော့ ကျနော်သိခဲ့သည်။ သို့ သော် သူ ဂီတ ၀ါသနာပါခဲ့မှန်း မသိ ခဲ့ ။ နော် ဆုံးကိုထိန်လ င်းရေးသောစာကိုဖ တ်ြ ပီးကိုထွန်းအောင်ကျော်သည် ခေတ်ပေါ် ဂီတအနုပညာကိုလည်း ဂီတသင်္ကေတနုတ်ဖြင့် စနစ်တကျ လေ့လာတတ်မြောက် တီးခတ်တတ်သူတဦးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပြီး ကိုဗဟိန်းနှင့် တော်တော်တူတဲ့သူဘဲဟု အတည်ပြုခဲ့ မိသည်။ ကိုဗဟိန်းကလည်း ဂီတ၀ါသနာထုံသူ မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့်လည်း ကိုဗဟိန်းသည် ထိုစဉ်က ကိုဋ္ဌေးမြိုင် (ဆရာကြီးဒဂုံတာရာ) နှင့်အရင်းနှီးဆုံးသူ ဖြစ် ခဲ့ သ ည် ။ ဆရာတာရာက သူ့  ကို့  က ဗျာနှ င့် တင် စား၍ ရုပ်ပုံ လွှာ ဖွဲ့ ခဲ့ ဖူး သည် ။ အခုကိုထွန်းအောင်ကျော်ကလည်း ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဂီက ၀ါသနာပါသူ၊ သို့သော် သူ တို့  နှ စ်ဦးသေဆုံး ပုံချင်းတော့ ကွာခြားနေသည် ။ ကိုဗ ဟိ န်း ကနှ လုံးရောဂါဖြင့်မန္တလေးဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသခံနေရင်း ဖဆပလ နှင့်ကွန်မြူနစ်ပါတီအကွဲ၌ စိတ်ထိခိုက်ပြီး ဆုံးပါးသွားခဲ့ရသည်။ ကိုဗဟိန်း၏ ဈာပနကို တူတံဇဉ် အလံအုပ်လျက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင် သွားရောက်ဂါရ၀ပြုခဲ့သည်။ သူကတော့တရုပ်ပြည်နယ်စပ်တောထဲမှာ သူလျှိုဟု မတရားစွပ်စွဲ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရသည်။ ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ သူသေဆုံးပုံ ကို မင်းကို နို င်အပါအ၀င် သူ့ရဲဘော် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ သိရှိနိုင်ခွင့်ပင်မရခဲ့ပါ။ ကို ဗဟိန်းက ရု ပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၊ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသမား၊ စာပေဂီတမြတ်နိုးသူ …၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကလည်း ရုပ်ချောချောကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၊ တော်လှန်ရေးသမား၊ စာပေဂီတ မြတ်နိုးသူ …၊ ကျနော့်အတွေးစိတ်အာရုံထဲမှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော် အသတ် မခံ ရမီ နောက် ဆုံးသီ ဆိုသွားခဲ့ သော ယု ဇနပင် နဲ့ ဖဲကြိုးဝါ သီ ချင်းလေးကိုမှ န်းဆ ခံစားကြည့်နေရင်း … တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်၌ ရတနာ ဘုံ မ္မိ နယ်မြေ မန်းတက္ကသို လ်ကြီး၏ သမဂ္ဂမြက်ခင်းပြင်ရှေ့တွင် … ကျဆုံးသွားလေသူ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၏ ပုံတူကြေးရုပ်သွန်းထုလျက် ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ချစ်ခင်လေးစားကြသော ကျနော်တို့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသား ရဲဘော် အားလုံး ၏ နှ လုံးသားများကိုဖဲြ ကိုးဝါများသဖွ ယ်ချည်နှောင် ဂုဏ်ြ ပုကြရမည့်ေ န့ ကို ရောက်ရမည်မလွဲဟု ကျနော် ယုံကြည်နေမိပါသည်။
ကိုထွန်းအောင်ကျော် … ရဲဘော်ရေ မြေနဲ့ကောင်းကင် မြင်နေသမျှ ရင်ခုန်နုသစ် သမုဒယမြစ်တစင်း လှပစွာ စီးဆင်းရစ်နေဦးမယ် … ယုံတယ် … ။
လေးစားလျှက် … ဇာနည် (၈၈,ဗကသ) ဇန်န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၂ (ကြာသပတေးနေ့)
Posted: 17 Jan 2012 12:17 AM PST